Edwin Van Der Hoeven - Kufungisisa, Sensitivity, Mediumship
"Iyo yose inopfuura huwandu hwayo zvikamu"
Tora bvunzo uye uzviwanire wega
Kufungisisa & HANYA
Dhawunirodha zvi (zvemahara) zviitwa uye uzviwone iwe pachako
Chii chiri kukutadzisa kuzadzisa zviroto zvako?
KUZVIREVEDZERA & KUSVIRA
Tsvaga mutauro unotaurwa nemweya wako
Kutaurirana nenyika isingaonekwe
Ndinovimba unowana zvauri kutsvaga pane ino saiti. Iyo inogona kumisikidzwa zvishoma zvakasiyana pane iwe zvaunotarisira kana yaishandiswa kubva kune wepakati kana murairidzi. Ini handitendi chaizvo kupfeka chivharo chinoti ndiri svikiro izvozvi uyezve crypto anofarira zvakare. Zvese zvinhu zvakabatana uye ini ndinowana kurudziro kubva kumatunhu ese ehupenyu.
Ndiri kuonawo izvi nevatori vechikamu kuti ini ndinotenderwa kutungamira nenyaya iri muhupenyu hwavo. Vanouya kuzoshanda paX asi voona kuti Y inofanirwa kunyatsotarisirwa. Chipo cheicho ndechekuti ivo vanowana mibairo yakanaka mune ese mativi ehupenyu hwavo. Uye ndizvozvo! Hapana chakaparadzaniswa kubva kune mumwe nemumwe uye nekudaro iyo yakazara mufananidzo yakakosha. Ipapo chete ndipo panogona kutumbuka hupenyu hwedu.
Isu tese tiri kupfuura kuwanda kwezvikamu zvaro! Semunhu, muhukama, nemhuri yako kana neshamwari dzako uye vaunoshanda navo.
Facebook-f LinkedIn Twitter nzira Pinterest Youtube
teerera kuburikidza iTunes
teerera kuburikidza Spotify
teerera kuburikidza naDezer
Ronga B - Bitcoin ramangwana redu
Kufungisisa uye Kuziva
2 yekutanga mafomu ekufungisisa
Fungisisa zviri nani neBrainwave Entrainment
Kuporesa kufungisisa neononance yemwedzi izere
Mantras kubva kuBuddha
Iyo "Vajra Guru" mantra kubva kuPadmasambhava
Iwo manomwe chakras emuviri wedu etheric
Basic chakra resonance kufungisisa
Sacral chakra resonance kufungisisa
Solar plexus chakra resonance kufungisisa
Mwoyo chakra kutenderera kufungisisa
Throat chakra resonance kufungisisa
Yechitatu ziso chakra resonance kufungisisa
Crown chakra resonance kufungisisa
Akanyanya Anonzwisisa Munhu (HSP)
HSP - Yakakwirira Sensitive Kuona
5 chimiro cheMunhu Akakwira Sensitive
Uri munhu ane hanya zvakanyanya here? Tora bvunzo ye hsp
Kunzwa kukuru pabasa
5 matarenda emushandi anotarisisa
Bhuka rekutaurirana kwepakati
Ipa chiratidzo kuburikidza neakajeka-sensory kuona
Kuporesa, kutaura uye hunyanzvi kuburikidza neTrance
Edwin van der Hoeven CSNU, svikiro
Kubata uye mitengo
Hapana zvigadzirwa mune yako yekutenga ngoro
Edwin van der Hoeven - HSP / kukwirira kwekushushikana, zvekunamata uye zvine hunyanzvi
Sekutaura kwevaBhudha: vanhu vese vane chinhu chimwe chakafanana uye ndizvo 'kutsvaga kwemufaro'. Tsananguro yemufaro ine matauriro mazhinji emunhu; mari yakawanda, kutaridzika zvakanaka, shamwari inotapira, kubudirira, hutano hwakanaka, rusununguko, kugona uye nezvimwe
Unogona kutsvaga mufaro kunze kwako kana mukati mako.
Vanhu vazhinji munyika dzekuMadokero vanotarisa pamufaro kunze kwavo, zvisinei, ruzivo rwunoratidza kuti izvi zvinowanzopa kugutsikana kwechinguvana uye kuti unokurumidza kutanga kutsvaga rinotevera. Ndipo paunokudziridza mufaro wemukati paunenge uine mamiriro ekuva izvo zvine rudo uye zvine simba, zvinochengetedza kutarisisa kwako uye nekupa kurudziro yekubudirira kwako pachako
Ndinosiya mamiriro ako ekunze zvizere kwauri. Ndinoda kukubatsira iwe nekurima kwemukati kwemufaro, kudzidzisa pfungwa uye mutauro wekunzwa kwako.
Kuziva zvimwe? Wasvika panzvimbo chaipo ... nerudo, Edwin
Kudzidzisa wega 85 € / 90min.
Iwe unomhanyisa mune chimwe chinhu kubasa, unonetseka kutaura nezve ako manzwiro kana iwe unoda imwe tsigiro neako wega kana emweya kukura? Ndinokuonesa, ndinokusundira kunze kwenzvimbo yako yekunyaradza pazvinenge zvakakodzera uye nekukubatsira kuzvitarisa nenzira yakanaka uye inovaka.
Kubvunzana kwepakati 50 € / 45min.
Senge svikiro, rakasimbiswa neSNU, ini ndinopa kubvunza kunoenderana nenzira yeChirungu. Izvi zvinoreva kuti haufanire kuunza zvinhu zvakaita semifananidzo kana zvishongo. Ini ndinosangana neiye anoda kutaura kubva kuNyika yeMweya uye nekupa izvi nehuchapupu hwakawanda sezvinobvira kubvisa kusahadzika kupi nekupi.
Kuporesa pamweya 20 € / 25min.
Unonzwa ruzivo rwekuporesa mumweya. Mushonga unotora ingangoita maminetsi makumi maviri nemashanu umo ini ndinoteedzera kune yepanyika mweya kuti ndikwanise kupfuudza kupora.
Mashoko pamusoro pezvikwereti pamutengo inogona kuwanikwa pano.
Bitcoin uye pamweya yekutengesa
Zvemweya uye zvemari zvinhu dzimwe nguva zvinoita kunge zvinopesana nemumwe. Mune ino vhidhiyo yekutanga ini ndinotsanangura kuti iwe unogona zvechokwadi kudzidza zvakawanda nezvako kana iwe uchitengesa mumatokisi kana cryptos. Iyo inodzidzisa iwe nezve kushivirira, kutarisa, kutya, zano uye zvimwe zvakawanda hunhu izvo zvinogona kukushandisa zvakanyanya kwauri muhupenyu.
Rupo runofanira kuyerera munguva dzekutambudzika
Mari yakafanana nemvura uye inofanira kuyerera zvakasununguka. Munhu anongova nzvimbo yepakati muiyi inoenderera inoshandura. Naizvozvo, dzidzira rupo kuitira kuti iwe ugone kurega zvakasikwa zvichiita basa razvo.
Chitendero chechokwadi chiri chekuvimba
Chivimbo chinoratidzwa mune mufaro usingaperi kuti zvese zvakanaka sezvazvinofanirwa kuva. Zvese zvaunogona kuita ikozvino kuziva hupenyu.
Sensitivity tikiti yako kune hupenyu hwekugadzira
18 Kurume, 2020
Kunzwa kwedu inzira yekuziva iyo yakakwira marefu uye zviyero zvekuziva uye nehupenyu. Unoteedzera kuitei? Iyo yakakwira kuziva kwedu, ndipo patino kwanisa kugona kuumba hupenyu hwedu. Iyi nzira iwe unogona kushandisa yako sensitivity kutungamira hupenyu hwakanaka uye hwekugadzira hupenyu.
Iwe unonyanya kufunga here? Ipapo huropi hwako hunogadzira ruzivo rwekunzwa uye iwe unofungisisa pamusoro payo zvakadzama Ruzivo rwako rwekunzwa rwakanyanya, rwakaomesesa, rwakawandisa uye unosangana nechimwe chinhu nekukurumidza senge chitsva kana chakasiyana; unokurudzirwa nekukurudzirwa kupfuura munhu wepakati.
Iwe unoda uye uzere nekusashivirira
10 Chikunguru, 2019
Svika kwaunonzwa kwekunzwa kwako
8 Ndira, 2020
Ndiani kana chii chinonzi HSP?
9 inowanzo bvunzwa mibvunzo
Kufungisisa & kuziva
Kana munhu akataura nezvekuziva kukura ipapo kufungisisa kuri 'mamiriro ekuziva'. Mamiriro ekuziva mupfungwa iyi anodarika tsika dzinotipa nzira dzekuzviwana mamiriro ekuva kuuya. Kwemakore mazhinji ini saka kazhinji handina kudzidzisa tsika dzakananga, asi nzira dzekuwana yekufungisisa mamiriro ekuziva. Uye zvakare, ini ndinobatsira vanhu kuti vaone simba risinganzwisisike remantraga nekugadzira yavo yega mantra kana nekushandisa, semuenzaniso, iyo Vajra Guru mantra kubva kuPadmasambhava.
Iye zvino zvese zvasiyana
19 Ndira, 2020
Mufungo ndiye mutyairi wepfungwa mbiri, apo kufema kunokupa iwe mukana wekusangana neakakwira wega. Kufungisisa kuri kudzidza kurega kuenda kuri kuita izvozvi. Iye zvino haazivi nzvimbo nenguva, kwete iwe neni. MuIazvino zvinhu zvese zvakadero!
5 zvinhu zvekufungisisa zvinobatsira iwe kutarisa
6 Ndira, 2020
Kufungisisa hakuna kunyanya kuoma, kunyanya nerubatsiro rwechinhu chekutarisa pauri uchaona kuti izvi zvinokurumidza sei kukubatsira iwe kuwana runyararo rwemukati.
€4.99 €0.00 Muchitoro chekutengesa
€4.99 €2.49 Muchitoro chekutengesa
zviise iwe pakutanga
Chii chinoumba chiratidzo chako pachako, uzivi hwako? Basa rako rakakosha here kumufaro wako, imba yako, zvaunofarira, mumwe wako uye mhuri kana urikutsvaga zviitiko ... unofarira kufamba uye unosarudza kutsvaga zvinhu zvitsva uchienderera? Mukuona kwangu hapana mhinduro chaiyo kana isiriyo, asi panongova nemhinduro imwe chete chaiyo; Zvako. Uri kurarama chiroto chako here? Kana iwe hauna chokwadi sei uye kupi kutanga. Zvichida zvinyorwa izvi zvinogona kukupa kurudziro ... kutanga.
Wakapedzisira riiniko kuzviona iwe?
Kukura pamweya kuri pamusoro peiyo hombe mufananidzo uye kuzviziva pachako kunosiya pasina sarudzo! Unosangana iwe pachako uye saka hazvisi nyore nguva dzose kana kunakidzwa nekuti unosangana nezvikamu zvako, mauri, izvo zvinogona kunge zvichinyatso kutarisana.
Kana mune kusahadzika usabate
Chii chinotora kukunda kusahadzika? Kuti utarise zvekare izvo zvinogona kukupa chengetedzo. Kuti uvhare maziso ako kune yako yekunze nyika uye upinde. Ndiwe wega unogona kukupa chokwadi muhupenyu.
Isimba ripi raunokwezva?
3 Kukadzi, 2020
Chiratidzo chako chezodiac chinotaura chimwe chinhu nezve pesvedzero yemasimba masimba pawakazvarwa. Chiratidzo chako chezodiac chinoshanda sepakutanga! Mune ino blog ndinoda kutsanangura kuti nyeredzi idzi dzingaite sei pauri pamunhu.
Simuka mushure mekunge wadonha uye ramba uchifamba
Kurega izvo zvakapfuura ndizvo zvese zvaunofanirwa kuita. Kwete zvakare kuyedza kubatirira pane izvo zvausingashumire. Guruva riri kumashure kwako rinodonha kusvikira rakamirira kumutswa zvakare neanotevera anotsvaga. Hapana chinogara chakafanana, kune chero munhu, nei chingave chakasiyana kwauri. Naizvozvo, simuka zvakare uye ufambe, enderera mberi nehupenyu hwako uye usapfuurira kushungurudza. Rega zvako unzwe kusuruvara, asi zvakare onawo zororo senguva yekuenderera mberi.
Mediumship kugona kwechisikigo kwekujekesa kwekunzwisisa kwekuona uko iwe kwaunogona kutaura nekuziva kweiye akafa. Dzvanya apa kuti uwane rumwe ruzivo >
Ghost nyaya dzinotungamira kune rutendo chiitiko
22 Ndira, 2020	Hapana mhinduro
Nyika yemweya yakangwara uye inoziva nzira uye nguva yekutariswa. Kwete kukugutsa iwe, asi kuti uite zvitendero kuti zvioneke kuti iwe uri pachena kune chishamiso chehupenyu.
Mbudzi 21, 2019	Hapana mhinduro
Kwete 'chitendero', asi mufaro chitendero! Handizive nezvako, asi pandinosangana neshamwari yakanaka inondifadza.
Edwin anoitwa neChirungu Vanonamata 'National Union (SNU) yakasimbiswa;
Akanyoreswa semudzidzisi kuCRKBO.
Kuvanzika uye kodzero
Cookie chirevo (EU)
Cookie chirevo (US)
Gamuchira iyo tsambanhau
© Ruzivo ruri pawebhusaiti iyi rakaunganidzwa nekutarisirwa kukuru, zvisinei hazvo panogona kunge paine zvikanganiso kana zvisirizvo hapana kodzero dzinogona kutorwa kubva pane izvi.
yaakaita ❤ by Yakawedzera Kukosha - Edwin van der Hoeven
Dzvanya iyi icon kumusoro kumusoro kurudyi menyu kuvhura iyi pop-up
Teerera kune kwako kufungisisa kwezuva nezuva pano
Zvakare tsvaga kufungisisa uku pa TIRI MUMWE (weare-one.io)
Vanhu vazhinji vane mahara Crown Chakra resonance kufungisisa inotorwa kuti ufungisise pamwe nemwedzi uzere. Wanga uchiziva here kuti kumira kwemwedzi kune hukama neChakras? Uye ndosaka paine manomwe akasiyana resonance kufungisisa, imwe paChakra.
Iyi pop-up inoratidza kufungisisa kwakabatana ne chinzvimbo chazvino chemwedzi.
HSP uye kunzwa kwekunzwa
Unoda kuziva zvimwe?
Nditumire rumwe ruzivo